वाणिज्य बैंकहरुको ३४ करोडभन्दा बढी कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कसको कति ? - Laltin Media
Home»सेयर बजार»वाणिज्य बैंकहरुको ३४ करोडभन्दा बढी कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कसको कति ?
वाणिज्य बैंकहरुको ३४ करोडभन्दा बढी कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत, कसको कति ?
By लाल्टिन डट कम May 28, 2022 Updated: May 29, 2022 No Comments7 Mins Read
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा विभिन्न कम्पनीको विभिन्न २४ वटा वाणिज्य बैंकहरुको बोनस सेयर सूचीकृत भइसकेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट वितरण गरेको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । नेप्सेमा ३ वटा वाणिज्य बैंकको भने बोनस सेयर सूचीकृत भएको छैन् । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको बोनस सेयर भने सूचीकृत भएको छैन् ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वाणिज्य बैंकहरुले बोनस सेयर वितरण गर्दा २४ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ३४ करोड १७ लाख ९२ हजार ५५६ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । जसमा ३ वटा वाणिज्य बैंकहरुको बोनस सेयर जोडिएको छैन् ।
प्रभु बैंक लिमिटेडको १२ प्रतिशत बोनस सेयर वापतको १ करोड ३६ लाख १६ हजार ४६८.७६ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। बैंकले गत आव २०७७–७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशत बोनश शेयर र बोनश सेयरको कर प्रयोजनका लागि ०.६३ प्रतिशत नगद गरी कूल १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको १४ प्रतिशत बोनस सेयर बापतको १ करोड ७६ लाख ९१ हजार ४६२.०७ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कायम चुक्ता पूँजीको शेयरधनीहरूलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ३ प्रतिशत नगद गरी कूल १७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको २० प्रतिशत बोनस सेयर बापतको २ करोड १९ लाख ७९ हजार ८५९.६०४५ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.०५६ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नबिल बैंक लिमिटेडको ३३.६० प्रतिशत बोनस सेयर बापतको ४ करोड ६५ लाख १७ हजार ३५५.८९ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । । बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ३३.६० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ४.४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको ३.५० प्रतिशत बोनस सेयर बापतको ३३ लाख २२ हजार ७५२.२६०३ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ३.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ १.८१ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.३१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
एनएमबि बैंक लिमिटेडको १२.५० प्रतिशत बोनस शेयर बापतको २ करोड ४ लाख ७ हजार ४५१.०७ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ३.३ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको ६ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ५३ लाख ३६ हजार २३०.३१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ४.३२ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको ५.७५ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ५१ लाख ९४ हजार ७९६.९६३९ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.३० प्रतिशत नगद गरी कूल ६.०५ प्रतिशत लाभाशं वितरण गरेको थियो ।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको १४.२५ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको १ करोड ५६ लाख २१ हजार २७६.३६ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट कायम चुक्ता पूँजीको १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको १६ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको २ करोड ५७ लाख ३२ हजार ८५९.०४ कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकल गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्त पूक्ता पूँजीको १६ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.६३१३ प्रतिशत नगद गरी कूल १६.६३१३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस शेयर वापतको २ करोड १६ लाख ३२ हजार ५०३.०३ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ३.५ प्रतिशत नगद गरी कुल १३.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको १२ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको १ करोड ८ लाख ५ हजार ७८५.४३ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ८ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ८५ लाख ५६ हजार ५५१.८९ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
सनराइज बैंक लिमिटेडको ६.६५ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ६३ लाख ९ हजार ४८३.०९ कित्ता बोन सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
सिभिल बैंक लिमिटेडको ५ प्रतिशत बोनस सेयर बापतको ४३ लाख २१ हजार ८३०.४२ कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस बापतको ८५ लाख ७२ हजार २३०.८१ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ ३.०६ प्रतिशत नगद गरी कुल १३.०६ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको १२.६११ प्रतिशत बोनस शेयर बापत २ करोड ५ लाख २ हजार ११८.२३ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२.६११ प्रतिशत बोनस शेयर र ३.३८९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडको ८ प्रतिशत बोनस सेयर बापतको ८२ लाख ५१ हजार ६१३.३४ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको ८ प्रतिशत बोनश सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ९६ लाख ५८ हजार १७६.४२९० कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ४ प्रतिशत नगद गरी कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको १३.३० प्रतिशत बोनस शेयर बापतको १ करोड २० लाख ४० हजार ६१० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरी कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मेगा बैंक लिमिटेडको १० प्रतिशत बोनस शेयर बापतको १ करोड ४६ लाख ५४ हजार ९६४.९५७ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बानेस सेयर र कर प्रयोजनार्थ २.०७ प्रतिशत नगद गरि कूल १२.०७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
कुमारी बैंक लिमिटेडको ६ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको ८३ लाख २७ हजार ८४.९० कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि २.६७ प्रतिशत नगद गरी कूल ८.६७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको १२.९१३ प्रतिशत बोनस सेयर बापतको १ करोड ६२ लाख ५०८.९१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२.९१३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ३.०८७ प्रतिशत नगद गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
सानिमा बैंक लिमिटेडको १७ प्रतिशत बोनस शेयर बापतको १ करोड ६४ लाख ५८ हजार ५८२.४४ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको लाभांश रद्द गरेका कारण यसपटक सेयरधनीहरुले लाभांश पाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकको पूँजी पर्याप्त नदेखिएको भन्दै बैंकको लाभांश रद्द गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.७८९४७ प्रतिशत नगद गरी कूल १५.७८९४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले उक्त लाभांश रद्द गरेपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुन सकेन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक लिमिटेडको लाभांश राकेका कारण यसपटक सेयरधनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग डिमर्जर गरेका कारण लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद गरी कूल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड नेप्सेमा सूचीकृत नभएकाले बैंकको बोनस सूचीकृत भएको छैन। बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ३ प्रतिशत नगद गरी कूल ३३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।